Mitantana ny korontana | Reef Resilience
Ny drafitry ny valim-baventim-panafahana dia manampy amin'ny fanetsehana ny hetsika, mamaky mora foana ny hetsika, ary mamantatra tsaratsara kokoa ireo tranonkala izay mety hampiseho ny toetran'ny fanoherana sy ny faharetana. Sary © Kee Alfian / Marine Photobank
Ny haran-dranomasina dia mora ateraky ny fikorontanana maro izay mety hanomboka haingana sy henjana, bato, fipoahan'ny aretina ary karaoke mpamono, drivotra mahery, ary hetsika fananganana coral. Na dia miovaova amin'ny sehatra ara-pitenenan-dry zareo aza ireo tranga ireo ary ny fiantraikan'ny asan'olombelona ataon'izy ireo dia afaka mitaky valiny kely amin'ny mpikarakara ny haran-dranomasina izy ireo.
Ny tranga tsirairay dia mety ho tsy azo hambara tsy araka ny tokony ho izy, kanefa azo inoana fa ny mpitantana dia tsy maintsy miady amin'izy ireo amin'ny fotoana iray. Rehefa tratrany izy ireo dia maro ny trangan-javatra mahavariana eo amin'ny sehatra, manimba ny tontolo iainana, ary ny tombontsoam-bahoaka. Ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasin'ny Coral dia tsy azo ihodivirana fa hamaly ny zava-misy amin'ny fomba sasany, ary ny fanomanana amin'ny alàlan'ny famolavolan-kevitra dia mety ho zava-dehibe amin'ny fitantanana ny loza ara-tontolo iainana sy ny lazany. Ny drafitry ny valim-panadinana dia mety hanome ho an'ny mpitantana ny fahalalana, ny fitaovana ary ny fepetra hametrahana valinteny mifanaraka amin'izany.
Ny valinteny mahomby dia mitaky rafitra iraisam-pirenena / ara-dalàna ary koa ny fepetra ilaina eo amin'ny asa. Ny drafitry ny valim-panafahana dia mety haka endrika samihafa, fa ny singa mahazatra indrindra dia:
Fampitandremana aloha - Rafitra iray ahafahana manamarina raha toa ka misy fepetra henjana mivaingana eo amin'ny fiatrehana ny toe-pahasalamana na ny fahitan'ny tsindrin-tsakafo vao haingana ho an'ny valim-potoana. Ny ankamaroan'ny mpanara-maso dia mampitombo ny mety hitranga mety hitranga amin'ny tranga iray, ka ny tetikady ho an'ny fandraisana anjara malalaka amin'ny programa fampitandremana (toy ny fandaharana fandaharana an-tsitrapo) dia mety ho vokatra amin'ny fahombiazan'izy ireo.
Valin'ny fitarihana - Ireo manam-pahaizana na mpitantana za-draharaha dia mila manombantombana ny fanamarihana sy ny tatitra avy amin'ny rafitra fampandrenesana mialoha mba hamaritana ny filàna sy ny lanjan'ny valiny. Ho an'ny karazana tranga tsirairay dia mila mamaritra ny fomba hikarakarana ny valinteny ny drafitry ny valinteny, anisan'izany ny fanehoan-kevitra momba ny valinteny, ny karazana valin-kafatra, ny rafitra fanaraha-maso ny toetr'andro, ny fepetra momba ny paikady momba ny fifandraisana amin'ny fanambarana rehefa misy ny valim-bava, ary ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny loza.
Valiny - Ny valin-kafatra avy amin'ny sehatra mahomby sy mahomby dia mitaky fikarakarana fandaharam-potoana, izay ahitana ny protocole fampielezan-kevitra, ny fananganana ekipa, ny fepetra momba ny fitaovana, ny fomba fanombanana, ny tatitra momba ny tatitra, ary ny fanamarinana ny fifandraisana.
Hetsika fitantanana - Ny paikady fitantanana ho setrin'ny toe-javatra iray dia hiova arakaraka ny karazana sy ny henjan'ny hetsika. Ny fampiharana ny hetsiky ny fitantanana dia ho faritana amin'ny sehatra rehetra, ary ny antony toy ny firoboroboana sy ny antony nahatonga ilay zava-nitranga, ny fepetra fampihenana ny fanamafisana ny soatoavina, ny soatoavin'ny sôsekonomôniana amin'ny vatohara, ny fisian'ny karazam-borona tsy fahita na tandindonin-doza, ary ny fotoana Ny zava-mitranga dia ho zava-dehibe amin'ny famolavolana ny hetsika fitantanana.
Fanarahamaso ny fanaraha-maso - Ampahany manan-danja amin'ny valintenin'ny loza izany, satria manome fahatakarana bebe kokoa ny fiantraikany maharitra eo amin'ny vatohara amin'ny zava-mitranga ary ahafahan'ny mpitantana manombana ny fahombiazan'ny fihetsiketsehana.
Ireo fizarana roa manaraka dia manome tari-dalana sy loharano ho an'ny famolavolana sy fanatanterahana ny drafitry ny valintenin'ny loza ho an'ny roa amin'ireo karazana zava-nitranga tena manan-danja sy mihabetsaka:
Ny fizarana farany dia manome tari-dalana momba ny fitantanana ranomaso.